Zoom - Software-ka shirarka fiidyowga ah ee ay soo saartay Zoom Technologies ee San Jose.
Qorshaha bilaashka ah wuxuu ogolaanayaa ilaa 100 kaqeybgale oo isku mid ah, oo leh xaddidaad 40-daqiiqo ah. Isticmaalayaashu waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku cusboonaysiiyaan iyagoo iska diiwaan gelinaya qorshe lacag leh. Qorshaha ugu sarreeya waxa uu taageerayaa ilaa 1,000 ka-qaybgale oo isla socda shirarka socda ilaa 30 saacadood.
Intii lagu jiray masiibada Fayraska faafa ee Korona 2019–20 (COVID-19), waxaa jiray koror weyn oo ku saabsan adeegsiga Zoom ee shaqada fog, waxbarashada fogaanta, diinta iyo xiriirka bulshada ee khadka tooska ah. Korodhka ayaa horseeday in Zoom uu noqdo app-ka mobilada ee 5-aad ee loogu soo degsado adduunka oo dhan sanadka 2020 477 milyan oo la soo dejiyay.
Ku-deeqaha iskaa ah, Markhaatiyaasha Yehowah waxay iibsadeen xisaabaadka Zoom in ka badan 65,000 oo jameeco ah oo ku yaal in ka badan 170 waddan si loogu isticmaalo shirarkooda jameeco (waxaa dheer, inta badan Markhaatiyaasha Yehowah adduunka oo dhan waxay u isticmaalaan software-kan ujeeddooyin diimeed).
Daabacaadda koowaad: Sebtembar 10, 2012
Nidaamka hawlgalka: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Firefox OS
Nooca: videoconferencing, VoIP, fariimaha degdega ah
↑ Videoconferencing for Congregation Meetings
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoom&oldid=224899"
Last edited on 25 Nofeembar 2021, at 19:30
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Nofeembar 2021, marka ee eheed 19:30.